सरकारको व्यवहारले धुर्मुस निराश, कति सकियो रंगशालाको काम? » Onlycricnepal
सरकारको व्यवहारले धुर्मुस निराश, कति सकियो रंगशालाको काम?
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार १३:२८
काठमाडौं: केही समयअगाडि सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले टुहुरोजस्तो भएको आफूले अभिभावक भेटेको महसुस गरेको बताएका थिए । उनले यसो भन्नुको कारण थियो, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उनलाई बोलाएर चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाबारे सोधखोज गरेका थिए ।
रंगशालाको जम्मा क्षेत्रफल १७ हजार ६६२.५ स्क्वायर मिटर रहेको छ । यसमध्ये साढे दुई कट्ठा पिचको क्षेत्रफल रहनेछ भने आउटफिल्डमा दुबो लगाउन सुरु गरिएको हो । “३० जना कामदारले दैनिक दुबो लगाइरहेकाले एक हप्तामा दुबो लगाउने काम सकिन्छ। पिचको काम भने सकिन केही समय लाग्ने छ,” सीताराम भन्छन् ।
जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफू विचलित नभई अटल भएर काम गरिरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “राष्ट्रले नै गौरव गर्ने परियोजना बनाइरहेको छु । सरकारले एक न एक दिन त कसो सहयोग नगर्ला र ?” यो समाचार बाह्रखरीबाट साभार गरिएको हो।
सन्दीप र सोमपालले लिए विकेट
४ बैशाख २०७८, शनिबार १३:३७
यस्तो बन्दै छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला (फोटो फिचर)
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १३:४३
इपीएलः अनिल खरेल महँगो मूल्यमा पारसको टिममा अनुबन्ध
१५ माघ २०७६, बुधबार ०४:०३
न्यूजिल्याण्डद्वारा भारतलाई २७४ रनको लक्ष्य, टेलरद्वारा आज पनि उत्कृष्ट ब्याटिङ
२५ माघ २०७६, शनिबार ०५:५३